नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना फैलिसकेको हो ? (भिडियो सहित) - NepalTimes
नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना फैलिसकेको हो ? (भिडियो सहित)
२२ चैत, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसले पनि प्रवेश पाएको छ ।
भारतसहित ब्राजिल, बेलायतमा त्रसित बनाइरहेको नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालमा समेत डर पैदा गरेको छ । अलिक बढि संक्रामक भनिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसका तीन जना संक्रमित नेपालमा भेटिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा त्रिनगर नाकाबाट भित्रिएका कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र डोटीका एक र एक जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले पुष्टि गरेका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेको भारतमा शनिबारमात्रै झन्डै ९३ हजार संक्रमित थपिएका छन । योसँगै भारत संसारमा दैनिक धेरै कोरोना संक्रमित थपिने मुलुकमध्ये पहिलो नम्बरमा पुगेको छ ।
खुला सिमाना भएको भारतबाट दैनिक हजारौँको संख्यामा मानिसहरु आवतजावत हुने, रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरु भारतमा बढेको संक्रमणबाट बच्न नेपाल आउने र नेपाल प्रवेश गर्दा सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्ने परिपाटीले नेपालमा संक्रमणको अवस्था भयावह हुने सम्भावना बढेको छ । दैनिक करिब २ सयको हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै गरेको अवस्थामा नयाँ प्रकारको कोरोनाका संक्रमित नेपालमा पुष्टि हुँदा समाजमा संक्रमण फैलिसकेको देखिएको छ । ट्राभल हिस्ट्री भारत भएका नेपालीमा संक्रमण देखिनु र बढि संक्रामक भाइरस नेपालमा समेत पुष्टि हुनुले भाइरसको फैलावट भयावह हुन सक्ने देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा नागरिक आँफै गैरजिम्मेवार बन्दा भित्र–भित्रै संक्रमण उच्च भएको हुनसक्छ तर पीसीआर परिक्षणको दायरा फराकिलो नबन्दा संक्रमितको संख्या ३ अंकमा मात्रै छ । तर ३ अंकमा देखिएको संक्रमितको संख्या सहजै बढ्न सक्ने पुरानो अनुभवलाई भने नकार्न सकिँदैन । दैनिक लाखको हाराहारीमा भारतमा संक्रमित भेटिँदा सिमानाबाट खुलेआम हजारौँ नेपाल भित्रिरहेका छन् ।
नेपाल भित्रिएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्म नगर्दा उनिहरुबाट नेपालमा संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम छ । नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस बेलायत वा दक्षिण अफ्रिकामा बढि संक्रामक भएको खबर बाहिरिएको थियो । यता भारतमा पनि डबल म्यूटेन्ट भाइरस बढी संक्रामक रहेको भारतले जनाएको छ । सबै भाइरसहरू जस्तै, कोरोनाभाइरस एकबाट अर्को व्यक्तिमा जाँदा यसको स्वरुपहरुमा परिवर्तन हुनसक्छ । त्यसरी परिवर्तित भाइरसको स्वरुपका आधारमा कोरोनाको नयाँ प्रकारलाई नयाँ कोरोना भाइरस भनेर बुझ्न थालिएको छ । कहिलेकाँही भाइरसको स्वरुप परिवर्तन भएपनि भाइरसको व्यवहार गर्ने तरिकामा भने परिवर्तन नआउन सक्छ । तर ब्राजिल, बेलायत, भारतमा देखिएका नयाँ प्रकार बढि संक्रामक देखिएकाले नेपालमा समेत त्यहि प्रकृति र व्यवहारको भाइरसले संक्रमण उच्च बनाउन जोखिम छ ।
नयाँ प्रकारको कोरोनाले भारतमा तहल्का मच्चाइरहेको बेला, नेपालमा समेत उहि प्रकृतिको कोरोना पुष्टि हुँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।